Arati Lohorung: 2017
बिहानै उठेर टि यू गेट पुग्दा सवा सात बजि सकेको थियो । दिन सफा थियो साथै मन खुशी थियो । अचेल धेरै घुम्न न निस्किने प्रण गरेको छु । घुम्ने पनि नसा रहेछ । नसा नलागेकै राम्रो ।
आज काम बिशेष छ । पानी परेको परेकै छ । बाटो हिलाम्ने छ । तै पनि नगइ नहुने छ ।
श्रीमानको मूड अली खराब छ आज किनकी बाटो हिलाम्ने र लामो छ । म गफमा भुलाउदै छु र बाटो छोट्याउने प्रयास गर्दै छु । बाटो नराम्रो भए पनि तल तिरको धान बारी क्या राम्रो छ ।
चियो सुरुप्प पियौ अनी फेरी लाग्यौ गन्तब्य तिर ।
काम सकियो अनी फेरी उही धुलौटे काठमाडौं आइपुगियो- शनिबारको दिन बेलुकी पख
आमा छोरा लसुन बारी मा पानी हालेर फर्केपछी
'छोरा आज के गर्यौ छ्यमालाई भन त'
'घा स अ ( घाँस) मा पानी हाले'
Posted by Arati at 1:59 PM No comments:
‘लप्टन को छोरा लैगुन्डा मोरा ‘
‘अनि तपाई को फुपा बित्नु भएछ, बार्नु हुदैन ?’ मैले आमालाई सोधे .
‘ यो भैसी तेरो है’ छोरासंग फोनमा कुरा गर्न जान लाग्दा फुपा ले फुपुलाई भन्नु भएछ अनि के भनेको होला भनेर फुपू दंग पर्नु भएछ . कुरा के रहेछ भने छोराले आमालाई छुट्टै पैसा विदेश बाट पठाउनु भएको थिएछ तर फुपाले दिनु भएन छ . फोनमा कुरा गर्दा ‘ छोराले आज त मजा मजा गर्नु है ‘ छोराले भन्दा छक्क . कुरा गर्दै जादा सब थाहा भयो . अनि आमा सम्म यो कुरा आइपुग्यो .
‘लप्टन को छोरा लैगुन्डा मोरा ‘ आमा फुपालाई जहिले सम्झदै भन्नु हुन्थ्यो .
Posted by Arati at 9:12 PM No comments: